Ukuxhumana akusewona nje umsebenzi “othambile”.
Ukuxhumana kungathuthukisa ukusebenza kwenkampani futhi kuqhube impumelelo yebhizinisi. Singakusungula kanjani ukuxhumana okuphumelelayo futhi sishintshe ukuphathwa?
Okusemqoka: Ukuqonda isiko nokuziphatha
Inhloso yokuxhumana okusebenzayo nokuphathwa koshintsho ukukhuthaza isimilo esihle sabasebenzi, kepha uma ingekho inkambiso yenkampani kanye nokuqwashisa ngokuziphatha njengesisekelo, amathuba okuphumelela ezinkampanini angancishiswa.
Uma abasebenzi bengenakukhuthazeka ukuthi babambe iqhaza futhi baphendule kahle, ngisho necebo lebhizinisi elivelele kakhulu lingahluleka. Uma ibhizinisi liphakamisa isiphakamiso samasu amasha, khona-ke bonke abasebenzi badinga ukwenza ngenkuthalo ukucabanga okusha futhi babelane ngemibono emisha bodwa. Izinkampani eziphumelele kakhulu zizokwakha ngenkuthalo isiko lenhlangano elihambisana necebo labo lenkampani.
Imikhuba ejwayelekile ifaka phakathi: ukucacisa ukuthi imaphi amaqembu ezisebenzi nokuthi yiziphi izinto ezidingekayo ukuxhasa izinhloso zenkampani; ukuhlukanisa abasebenzi benkampani nokucacisa okungakhuthaza ukuziphatha kwamaqembu ahlukene abasebenzi ukuze bakwazi ukusiza inkampani ukufeza izinhloso zayo; ngokolwazi olungenhla, Yakha izimo zokuqashwa kanye nemivuzo nezikhuthazo zeqembu ngalinye labasebenzi elisemqoka ngokuya ngomjikelezo wempilo wamathalente.
Isisekelo: Yakha isiphakamiso senani elikhangayo lesisebenzi bese usisebenzisa
I-Employee Value Proposition (EVP) "yisivumelwano sokuqashwa", esifaka zonke izici zesipiliyoni sabasebenzi enhlanganweni-kufaka phakathi hhayi kuphela izinzuzo zabasebenzi (ulwazi lomsebenzi, amathuba, kanye nemivuzo), kodwa futhi nokubuyiselwa kwesisebenzi okulindelwe inhlangano (amakhono ayinhloko abasebenzi), umzamo osebenzayo, ukuzithuthukisa, amanani nokuziphatha).
Izinkampani ezisebenza kahle zisebenza ngokugqamile kulezi zici ezintathu ezilandelayo:
(1) .Izinkampani ezisebenza kahle zifunde endleleni yokwehlukanisa imakethe yabathengi, futhi zihlukanise abasebenzi ngamaqembu ahlukene ngokwamakhono noma izindima zabo, kanye nezimpawu zabo ezihlukile zomuntu siqu kanye nokuma kwabo emphakathini. Uma kuqhathaniswa nezinkampani ezinekhono eliphansi, izinkampani ezisebenza kahle zinamathuba aphindwe kabili okuchitha isikhathi ukuqonda ukuqonda okushukumisa amaqembu ahlukene abasebenzi.
(2) .Izinkampani ezisebenza kahle kakhulu zakha iziphakamiso zenani labasebenzi ezahlukanisiwe ukuze zihlakulele isiko nokuziphatha okudingwa yinhlangano ukufeza izinhloso zayo zebhizinisi. Izinkampani ezisebenza kahle kakhulu zinamathuba angaphezu kokuphindwe kathathu okugxila ekuziphatheni okuqhuba impumelelo yenkampani esikhundleni sokugxila ikakhulu ezindlekweni zephrojekthi.
(3) Ukuphumelela kwabaphathi ezinhlanganweni ezisebenza kahle kakhulu kugqamile ekugcwaliseni iziphakamiso zenani labasebenzi. Laba baphathi ngeke bachaze abasebenzi “ngezimo zokuqashwa” kuphela, kodwa futhi bazofeza izethembiso zabo (Umfanekiso 1). Izinkampani ezine-EVP esemthethweni futhi ezikhuthaza abaphathi ukuthi bayisebenzise ngokugcwele i-EVP bazobheka kakhulu abaphathi abasebenzisa i-EVP.
Isu: ukugqugquzela abaphathi ukuthi benze ukuphathwa koshintsho olusebenzayo
Iningi lamaphrojekthi wezinguquko ezinkampani alizange lifinyelele ezinhlosweni ezibekiwe. Kuphela ngama-55% wemiklamo yenguquko ephumelele esigabeni sokuqala, futhi yingxenye yesine kuphela yamaphrojekthi wezinguquko athola impumelelo yesikhathi eside.
Abaphathi bangaba yisisekelo soguquko oluyimpumelelo-isisekelo sokulungiselela abaphathi bezinguquko futhi babenze baphendule ngeqhaza labo kunguquko kwezamabhizinisi. Cishe zonke izinkampani zihlinzeka ngamakhono okuqeqeshelwa abaphathi, kepha yingxenye yesine kuphela yezinkampani ekholelwa ukuthi lokhu kuqeqeshwa kuyasebenza ngempela. Izinkampani ezihamba phambili zizokhuphula utshalomali lwazo ekuqeqesheni abaphathi, ukuze bakwazi ukunikeza abasebenzi babo ukwesekwa okwengeziwe futhi basize ngesikhathi soshintsho, balalele izimfuno zabo futhi banikeze impendulo eqinile nenamandla.
Ukuziphatha: Yakha isiko lomphakathi elihlangene futhi ukhuthaze ukwabelana ngolwazi
Esikhathini esedlule, izinkampani bezigxile ekugcineni ubudlelwane bokusebenza obuphezulu kanye nokusungula ukuxhumana okucacile phakathi komsebenzi wabasebenzi nempendulo yamakhasimende. Manje, abasebenzi abanentshisekelo kubuchwepheshe obusha basungula ubudlelwano bokusebenza obukhululekile futhi obusebenzayo online nokungaxhunyiwe kwi-inthanethi. Izinkampani ezisebenza kahle kakhulu zakha imiphakathi yezinkampani-ihlakulela ukubambisana phakathi kwabasebenzi nezinkampani kuwo wonke amazinga.
Ngasikhathi sinye, idatha ikhombisa ukuthi abaphathi abasebenza kahle babaluleke kakhulu kunezokuxhumana lapho besakha imiphakathi yezinkampani. Esinye sezici ezibaluleke kakhulu zabaphathi abaphumelelayo kulesi simo esikhona manje ukusungula ubudlelwano bokuthembana nabasebenzi babo-kufaka phakathi ukusetshenziswa kwamathuluzi amasha ezenhlalo nokwakha umuzwa wokusebenzisana emphakathini. Izinkampani ezisebenza kahle kakhulu zizodinga ngokusobala abaphathi ukuthi bakhe imiphakathi yezinkampani futhi babe namakhono okufeza le nhloso-lamakhono ahlobene nokuthi bayayisebenzisa yini noma cha imithombo yezokuxhumana entsha.